Wasiir Xoosh: “Mucaarad” iyo MUCAARAD waa kala labo oo haddana kala akhris !!! | somaliswissdiaspora.com
Published on Mai 21, 2017 by admin · No Comments
Waxaa baryahaan bilowday guux ay wadeen dhowr qof oo siyaasiyiin ah oo ka waday dalka dibaddiisa shir albaabada u xiran yihiin kuna dhawaaqeen in uu caddaad kooda ahaa 80 siyaasiyiin ah, kaa soo la diiday in la sawiro shirka. Goob jooge xildhabaan ah oo shirka u tagay inuu u kuur galo hadafka laga leeyahay ayaa aniga iyo dad kale oo badan noo sheegay in shirka ay xaadir ku ahaayeen 12 qof marka isaga lagu daro. Qoraalkaan kuma saabsana daba gal siyaassiyiinta, dadka ay matalaan, caddadooda iyo waxa hadafkoodu yahay. Maqaalkan wuxuu falanqeyn ka bixinayaa “ Mucaarad” waxa looga yaqaan caalamka iyo fikradda siyaasadeed ee ay xambaarsantahay oo si cad uga duwan MUCAARAD-ka habowsan oo Somalia ka dhex boodaya. Ka dibna waxaan eegeynaa MUCAARD-ka gurracan oo waddamada qaarkood ka jira sida Somaliya.